ကွန်ပျူတာနှင့် ကွန်ယက်ပိုင်းဆိုင်ရာ - lenovo thinkpad Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
ကွန်ပျူတာနှင့် ကွန်ယက်ပိုင်းဆိုင်ရာ classified: အသုံးပြုပြီး Lenovo Thinkpad
330000 (99% New) error အာမခံ ပေးပါတယ် ဆိုင်မှာ လာပီး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ် နယ်ကိုလဲပို့ပေးပါတယ် G-19 used laptop 26 ×64 လမ်းထောင့် အမှတ် (၃) ရဲစခန်းတိုက်တန်း 09771303132 . 09258600590 . MDY
i3 6th Gen Desktop Set
i5 8th Gen Desktop Set
ASUS k555L corei5 NViDia GTx 940M